गिर निपल: कारणहरू र लक्षण
नारी शरीर शरीर मा निरन्तर कुनै पनि परिवर्तन गर्न धेरै संवेदनशील छ, तर स्तन सबैभन्दा संवेदनशील भाग हो। कुनै पनि महिला विशेष गरी क्षण जलमग्न Nipples सम्झना गर्न सक्दैन, यो कहिल्यै जस्तै छैन, स्तन आकार परिवर्तन भएको बेला नोटिस हुनेछ।
संरचना मा विचलन महिलाहरु मा परिसर को धेरै हुन्छ। यसलाई बन्द हुन्छ, यो छाती लुकाउन tends। निस्सन्देह, यो अवस्था सेक्स जीवनमा नकारात्मक प्रभाव छ। पतित स्तन निपल मात्र एक सौंदर्य अनिच्छा छ, यो अवस्था ल्याउँछ बेचैनी र वजन गम्भीर pathologies हुन सक्छ। दुखाइ केही समय नै लागि जाने हुन सक्छ, तर कहिलेकाहीं यो यति तीव्र र असह्य यो एक एम्बुलेन्स कल गर्न आवश्यक छ भन्ने छ।
किनभने को दर्दनाक sensations छन्
दुर्भाग्यवश, आज, प्रत्येक तेस्रो महिला स्तन स्वास्थ्य संग समस्या मा एक विशेषज्ञ को सहायता खोज्ने। स्तन रोग धेरै साधारण भएको छ, र यो मुख्यतया हर्मोन अवरोधहरू, जीवन को गलत तरिका कारण हो। किनभने कुनै पनि शरीर मा slightest परिवर्तन छाती गर्न प्रतिक्रिया।
सामान्यतया, निपल दुखाइ सामान्य फ्रेंच र बेचैनी को छाती भरि सँगसँगै छ। पहिलो कुरा महिनावारी (धेरै दुर्लभ) आउँदै बारेमा, बालक जन्ममा उमेर एक महिला विचार छ। त्यसैले, यो लक्षण समाप्त गर्न यो अवस्थामा यसलाई गाँसिएको, तपाईंको चक्र ट्रयाक राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यस्तो कुरा हो किनभने किन जलमग्न Nipples, जरुरी mammography अध्ययन आवश्यक पारंपरिक हर्मोन लागूपदार्थ, antidepressants, एन्टिबायोटिक, साथै गर्भावस्था को घटना मा? दुर्भाग्यवश, कहिलेकाहीं नैदानिक तस्वीर थप खतरनाक हुन सक्छ, र स्तन मा यस्तो परिवर्तन चिन्ह हो:
स्तन cysts ;
रोग विकास कारणहरू
रस को विरूपण - यो स्तन संरचना को सुविधा छ। तिरस्कार कारण हुन सक्छ:
को जनन र hypofunction को hypoplasia;
underdevelopment lactiferous वाहिनी;
सामान्यतया, परिवर्तन साथ दुवै पक्षले ठाउँ लिइरहेका छन्। यो एक स्तन, mammologist जान एक जरुरी आवश्यकता मा निपल फसे भने - यो क्यान्सर को पहिलो संकेत को छ। यो रक्सी खपत, धूम्रपान, ड्रग्स, गरिब पर्यावरण अवस्था रूपमा त्यस्तो नकारात्मक कारक बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ, धेरै स्वास्थ्य असर र स्तन को राज्य असर गर्न सक्छ।
महिला निपल एक बरु जटिल संरचना छ। यसको सतह मा 25 दूध ducts जो mammary ग्रंथि मा जाने छ। संयोजी ऊतक बैंड को गहिरो पत्रहरु मा सानो दूध ducts बीच अवस्थित छ। यी सुरु-अप को अपर्याप्त लामो किसिमहरु भित्री निपल समावेश। केही अवस्थामा, स्तनपान stretching बीम को सामान्य फारम को फिर्ती बढवा दिन्छ।
उठ्नेछ छैन को areola मा उल्टो Nipples, तिनीहरूले आफ्नो छाती मा थिचिएको भने, सपाट छन्। महिला यो दोष नोटिस सक्छ अहिलेसम्म गर्भवती भएको छैन, वा स्तनपान क्षण आउँछ। यो समयमा, निपल विकृति धेरै सजिलै देखिने छ। यसलाई निम्न हुन सक्छन्:
छोटो र समतल;
लामो र बलियो फिर्ता लिइयो।
बाह्य विभिन्न जलमग्न Nipples हेर्न। फोटो बेलामा मात्र बिरामीको चिकित्सक देखि हेरिएको यो सजिलै देखिने छ, प्रमुख मतभेद देखाउन सक्दैन।
प्लास्टिक सर्जन पृथक प्रकार2जलमग्न निपल:
स्तनपान गर्दा चाहेको स्थिति वा यौन लैंगिक उत्तेजना गर्न पहिलो फिर्ती। उत्तरार्द्ध कुनै पनि हेरफेर मा halos परे protrude छैन। यो स्थिति अक्सर सम्पूर्ण छाती मा दुखाइ सँगसँगै छ।
तपाईं निपल फसे भने, यो बच्चालाई खुवाउने गर्दा समस्या धेरै दिन्छ। यो किन खान सामान्य बच्चा छैन गर्न सक्छन् छाती, लो असुविधाजनक छ। यो प्रक्रिया सामना गर्न धेरै प्रयास भएको areola घाइते भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ, त्यहाँ पीडादायी चर्किएको र abrasions संक्रमण कि मा प्राप्त गर्न सक्छन् जो mastitis विकास गर्न नेतृत्व गर्नेछन्। जब purulent mastitis रुचाउने एकाएक समाप्त, र सञ्चालन आमा बाहिर छ।
यो दोष निम्न जटिलताहरू पैदा गर्न सक्छ:
माटो जम्मा वा बोसो गुहा मा;
गर्भावस्था को समयमा दूध को छाती देखि उत्पन्न हुन्छ।
कसरी विकृति सामना गर्न?
Nipples हात, विभिन्न वस्तुहरु पुल, तिनीहरूलाई बिस्तारै मालिश RUB: धेरै महिला "समस्या समाधान" गर्न प्रयास, यस्तो विकृति मा र समस्या गम्भीरता साकार छैन नोटिस। खोक्रो निपल निदान गर्दा categorically असम्भव गर्छन्। पहिले, प्रभाव सही हुनेछैन र दोश्रो कुरा, यो Nipples को neuroendocrine प्रणाली, गर्भावस्था को समयमा शरीर जो सबै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यस्तै दाह गर्भपात गर्न सक्छ कि एक टोन मा गर्भाशय कारण छ कि हर्मोन को उत्पादन को बढावा।
कुनै कुरा आफ्नो जीवनको के अवधि (गर्भावस्था को समयमा वा मात्र यसको प्रिपेरेटरी प्रक्रियामा, खुवाउने गर्दा) निपल गिर कि महिला देख्यो। आवश्यक पहिलो लक्षण मा mammalogy भ्रमण गर्न। परीक्षा पछि, डाक्टर कसरी पुनर्स्थापना गर्न सल्लाह हुनेछ छाती को प्रकारको।
को संयोजी पुल stretching लागि डिजाइन एक विशेष अस्तर गरे। जलमग्न Nipples Brava लागि उपकरण राम्ररी सिद्ध। तर, सधैं रूढिवादी उपचार गर्न मद्दत छैन, सर्जरी केही अवस्थामा आवश्यक छ।
शल्य चिकित्सा सुधार
निपल सुधार बाहिर छ स्थानीय एनेस्थेसिया अन्तर्गत सानो शल्य प्रक्रिया प्रयोग गरेर। एक महिला भविष्यमा र breastfeed जन्म दिन योजना भने यस्तो प्रक्रिया contraindicated हुन सक्छ। सही निदान परीक्षण पछि बनेको छ। यो विसंगति विशुद्ध व्यक्तिगत समस्या छ।
शरीर मा कुनै पनि हस्तक्षेप केही परिणाम, जटिलताहरू र बेचैनी वहन। तर केही अवस्थामा, यो प्रक्रिया एक व्यक्तिको जीवन, यो मानसिक अवस्था normalizes र यसको अघिल्लो अस्तित्व लागि रिटर्न बचाउँछ। सञ्चालन समयमा सबै ध्यान दूध ducts को निष्ठा को संरक्षण भुक्तान। halos को आधार मा एउटा सानो चीरा भएको माइक्रोस्कोप अन्तर्गत भयो, र कटौती गर्दै किसिमहरु उहाँले अगाडि झिकेर जो पछि निपल, मा कोरिएका हुन्छन्।
सर्जरी पछि पुनर्वास
यो अवधि बेला छाती क्षेत्रमा bruising, सुनिंनु र पीडा अवलोकन गरिनेछ। पूर्ण पुनर्वास अवधि6सप्ताह छ। यस समयमा तपाईं कठिन व्यायाम हरेस जोगिन तनाव, बाहिर जानुहोस् र सहज लुगा लगाउने थप समय आवश्यक छ।
यो समय पछि, तपाईं सबै सिफारिसहरू पालन र तिनीहरूलाई जीवन को एक तरिका रूपमा लिन जारी गर्न आवश्यक छ। महिला बिस्तारै रिटर्न गर्न संवेदनशीलता Nipples लम्बी हुन्छन्।
निदान निपल किन गिर बुझ्न परीक्षा नियुक्त गर्ने अत्यधिक योग्य डाक्टर-mammolog वा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, गरेको छ। यसो गर्न, तपाईं पारित गर्नुपर्छ:
मूत्र, मलको र रगतको सामान्य विश्लेषण;
निपल देखि जीवाणु गति;
अल्ट्रासाउंड वा mammography नियुक्त।
हरेक महिला आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह र शरीर मा कुनै पनि परिवर्तन गर्न ध्यान गर्नुपर्छ। तपाईं समय समयमा mammary ग्रन्थीहरूको निरीक्षण गर्नुपर्छ। यसलाई थप सतर्क हुनुपर्छ र एक स्तन मा निपल गिर भने, जरुरी उपाय लिन। र पनि दुखाइ र जरुरी आवश्यकता अन्य अप्रिय लक्षण को अभाव मा एक विशेषज्ञ कार्यालय हेर्न।
कसरी हानि बिना उच्च एडी मा हिंड्न सिक्न?
यो एक सुत्केरी आमाले बनाउँने गर्न सम्भव छ? स्तनपान लागि खाद्य
लक्षण र उपचार: महिला Urethritis
Breastfeed - दुखेको छाती: के
लक्षण र उपचार: महिला Trichomoniasis
लक्षण, विशेषताहरु र विशेषताहरु: प्राय महिलाहरु मा मूत्राशय को रोगहरु निरन्तर
"Caravel" (रेस्टुरेन्ट), कजान: ग्राहक समीक्षा
गृह परिस्थितिहरूमा आँखाहरू हेरचाह गर्नुहोस्
कार "Tesla": पहिलो प्रभावहरू
एक उज्ज्वल र चौंकाने वाली महिला-मेष: यो कसरी विजयी हुन सक्छ?
Photoshop मा सुधार अनुहार: आकार र रंग परिवर्तन
ड्रेगन सनफ्लावरलाई खेलमा "ड्रेगनमेनिया" कसरी निकाल्न सकिन्छ। खेलमा पूर्ण निर्देशन
श्रम संगठन - छ श्रम संगठनको एक प्रणाली ...
विज्ञान को वर्गीकरण
क्यालिफोर्निया रोल खाना पकाउने, र स्वादिष्ट रोल अन्य प्रजातिहरू
"Norbaktin": प्रयोग, सङ्केत गर्छ, समीक्षा लागि analogues, निर्देशन
प्रयोगकर्ता गाइड। म Webmoney पर्स नम्बर कसरी थाहा छ?
ग्रह मा सबै भन्दा अचम्मको ठाउँमा